Naannoo Amaaraa fi Afaar Keessatti Dhaqqabe Kan Jedhame Mirkanoofnaan Akkaan Yaaddeessaa Dha: Amerikaa
Wajjira minstira dhimma alaa Yunaaytid Isteets (Suuraa faayilii)
Humnootiin Adda Bilisummaa Uummata Tigraay (ABUT) Bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaa fi fixiinsaa dhaqqabsiisan akkasumas caasaalee hawaasaa barabadeessan kan jedhu gabaasa haaraa hin mirkaneeffamiin jiraniin akkaan yaadda’uu ishee Yunaaytid Isteets beeksiiftee jirti.
Hidhattonni gama hundaa hokkara siviloota irratti gaggeeffamu akka dhaaban gafatamee jira. Kana malees aangawoonni gabaasnii kun dhugaa ta’u isaa deemsa walii galaa fi ifa ta’een akka mirkaneessan, sana boodas kanneen itti gaafatamoo ta’an akka beekaman jetti Amerikaan.
Amma iyyu diinummaan wal ilaaluun kun yaalii gama Diploomaasiin akka furamuu qabii fi deggersa kan kennitu ta’u kan ibsistee Amerikaan, kunis filannoo isa duraa fi dhumaa akkasumas carraa tokkittiin isuma jettee akka amantu ibsite.
Kana malees dhiittaan mirga namoomaa fi seera cabsuun xumuura aragatee, mariin haal duree tokko malee akka gaggeeffamu, gargaarsii dhala namaa dhorkaa tokko malee akka seenuu akkasumas mariin hunda hirmaachiise haa jalqabamuu jetti Yunaaytid Isteetes.